रोचक जानकारी – Page 23 – MeroJilla.com
६ वर्षमा यौन शोषण १२ वर्षमा सामुहिक रेप ! Tuesday, May 20th, 2014
नायिका, मोडल, टेलिभिजन प्रोड्युसर, एक्टिभिष्ट र लेखक पामेला एन्डररसनले कान्स फिल्म फेस्टिबलमा सबैलाई चकित पार्ने खुलासा गरेकी छिन् । उनको यो खुलासाले हलिउडमा निकै हलचल मच्चाएको छ । उनले पामेला एन्डरसन ट्रस्टको एक च्यारिटेबल इभेन्टको क्रममा आफू निकै सानो उमेरमा नै यौन शोषण र बलात्कारको शिकार भएको बताइन् । यो इभेन्टमा उनले आफ्नो बारेमा थुप्रै निजी कुराहरु बताइन् । उनले..
सेक्स फ्रि विद्यार्थी होस्टल ! Monday, May 19th, 2014
धेरै मानिसहरु अझै पनि सेक्सका बारेमा खुलेर बोल्न चाहदैनन् । हाम्रोजस्तो राष्ट्रमा त झन् यसलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । तर विश्वमा यस्ता राष्ट्रहरु पनि छन् जहाँ सेक्सबारे व्यवहारिक पढाइ नै हुन्छ । चर्चा हो अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा रहेको एक विद्यालयको । बिगत केही बर्षदेखि चल्दै आइरहेको उक्त स्कुलको नाम ‘भियना सेक्स स्कुल’ हो । स्कुलका अनुसार यो सेक्स स्कुलमा..
अधिकतम् यौन सन्तुष्टि लिने उपाय Wednesday, May 14th, 2014
नियमित व्यायाम गर्ने महिलाले स्वस्थ शरीरसँगै बढी यौन सन्तुष्टि पाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । नियमित जगिङ अथवा जिम गर्ने महिलामा यौन उत्तेजना चाँडै आउँछ । साथै, त्यस्ता महिलाले चरमोत्कर्ष चाँडै हासिल गर्ने अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको अटलान्टिक युनिभर्सिटीका प्राध्यापक टिना एम पेनहोको टोलीले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो । उत्तेजना बढाउन..
ठूला स्तनको कृतिमान ! Tuesday, May 13th, 2014
अमेरिकी टेलिभिजन स्टार लसी विल्डले अनौठो सोख पालेकी छन् । आफ्ना स्तनलाई भीमकाय बनाएर कीर्तिमान राख्ने योजनामा उनी छन् । यस क्रममा उनले चिकित्सकको चेतावनीलाई समेत उपेक्षा गर्दै आएकी छन् । उनलाई आफ्ना भीमकाय स्तनले दैनिक जीवनमा निकै कठिनाई भइरहेको छ । भर्याङ चढ्न, मोटर चलाउन स्तनले निकै कठिन हुने गरेको उनी स्वीकार्छिन् । २१ पाउन्ड वजनका दुई स्तन थेग्न उनको शरीरलाई कम सकस..
विद्यालयमै सेक्स, गृहकार्यमा पनि सेक्स ! Monday, May 12th, 2014
अस्ट्रियाको राजधानी भियना नजिकै एउटा यस्तो स्कुल छ । जहाँ विद्यार्थीहरुलाई ब्यबहारिक रुपमै सेक्स गर्न सिकाइन्छ । बिगत केही बर्षदेखी चल्दै आइरहेको उक्त स्कुलको नाम ‘भियना सेक्स स्कुल’ हो । स्कुलका अनुसार यो सेक्स स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना गरी उनीहरुलाई सेक्सका बारेमा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गरिन्छ । यहाँ ब्यबहारिक रुपमै सेक्स सिकाइने दावी गरिएको छ । समाचारका अनुसार उक्त..
भुतसँग दुई पटक सेक्स गरे-नताशा हलिउडकी एक अभिनेत्रीले अनौठो दावी गरेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेकी छन् । हलिउड नायिका नताशा ब्लासिकले आफ्नो एउटा टेलिभिजन कुराकानीमा आफूले दुई पटक भूतसँग सेक्स गरेको दावी गरेर सबैलाई अचम्ममा पार्नुका साथै आनन्द दिलाएकी छन् । नताशाको यो स्वीकारोक्तिसहितको कुराकानीमा उनले भनेकी छन्–कुनै वस्तुले मलाई छोयो, तर, देखिएन । उनले भनिन्–म त्यतिबेला..
संसारकै अग्ली बेहुली
ब्राजिलकी सबैभन्दा अग्ली युवती चाँडै संसारकै सबैभन्दा अग्ली बेहुली बन्दै छिन । मोडलसमेत रहेकी ६ फिट आठ इन्च अग्ली एलिस्ने डे क्रुज सिल्वा नाम गरेकी ती युवती विगत तीन वर्षदेखि पाँच फिट चार इन्च अग्ला फ्यांकिनाल्डो डा सिल्वा कार्वाल्होसँग प्रेममा थिइन । अब उनीहरुले आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा बदल्ने निश्चय गरिसकेका छन । २९ मार्चमा उनीहरुले इङ्गेजमेन्टसमेत गरिसकेका छन । केटाको..
सेक्स गर्दागर्दै लोग्नेको ज्यान गएपछि पाँचवटी स्वानी डरले जंगलतिर Thursday, May 8th, 2014
सेक्स मान्छेका लागि अनिवार्य कुरा हो । तर धेरै खाएपछि चिनी पनि तितो हुन्छ भनेझैँ सेक्स भन्ने चिज बढि भयो भने पनि त्यसले हानी अवश्य गर्छ । सामान्य हानीको त के कुरा आवश्यकताभन्दा वा क्षमताभन्दा बढि सेक्स गर्दा ज्यानै समेत जाँदो रहेछ । यस्तै भएको छ नाइजेरियाका एक धनी उद्योगपतिलाई । ६ स्वास्नीका लोग्ने रहेका ती मान्छेको आफ्नी पाँचवटी श्रीमतीसँग लगातार सेक्स गर्दा ज्यानै गएको छ..
महिलाले यसरी गर्छन् हस्तमैथुन ! Saturday, April 12th, 2014
हाम्रो समाजमा महिलाले हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने धेरैलाई लाग्ने गरेको छ । तर, पुरुषको जस्तै महिलाले पनि विभिन्न उपाय अपनाएर हस्तमैथुन गर्ने गरेका छन् । डा. रूपाखेतीका अनुसार, महिलाको हस्तमैथुनबारे पहिलेको तुलनामा केही बढी चर्चा हुने गरेको छ र उनीहरूले हस्तमैथुन गर्ने कुराको स्वीकारोक्ति मात्र व्यक्त गरेका छैनन्, बरु यसबारे खोजीनीति गर्न थालेका छन् । उनी भन्छन्, ‘महिलाले..
सगरमाथा महोत्सवमा अस्ट्रिच चरा हेर्नेको भिड Friday, April 11th, 2014
गोलबजार (सिरहा), ।चैत २४ गतेदेखि लहानमा आयोजना गरिएको सगरमाथा महोत्सवमा अवलोकनका लागि राखिएको अस्ट्रिच चरा सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । इटहरीका व्यापारीले दुई वटा अस्ट्रिच चरा ल्याएर महोत्सवमा राखेको र अवलोकन गर्ने दर्शकसँग रु २० लिने गरेका छन् । टिकट लिए पनि विश्वकै ठूलो चरा भएकाले हेर्नेको घुइँचो बढदै गएको छ । सन्हैठा घर भई लहानमा बस्दै आएका राहुल यादव विश्वकै ठूलो..
महिला / पुरुषका गोप्य ५ तथ्यहरु Thursday, April 10th, 2014
१. पुरुषले आफ्नो केटि साथीले उसका अरु साथीलाई माया गरोस् भन्ने चाहन्छन् तर मन पराओस् भनेर चाहँदैनन् । पुरुषले आफ्नो गर्लफ्रेन्डले उसका साथीसँग केही समय बिताओस् भन्ने चाहन्छन् तर सधैँ साथीहरुसँग समय बिताएको अगाढ माया दर्साउने कुराहरु नगर्दा नै उचित हुन्छ । २. पुरुषले आफ्नो गर्लफ्रेन्डले जो–कोहीको पनि अत्यधिक प्रशंसा गरेको मन पराउँदैनन्, चाहे त्यो ब्राड पिट होस् कि सलमान..